Factory Vase Glass - Mpanamboatra vazy vita amin'ny vera, mpamatsy
Design Famolavolana mahafatifaty sy fampiasa】 Manampia loko vitsivitsy amin'ny sehatry ny kanto misy anao miaraka amin'ny caddy Cactus tsy hay tohaina! Tonga lafatra amin'ny fitehirizana pensily, crayons, sticky note, hety, marika famafana maina ary maro hafa.
【Fananganana akrilika mafy】 Vita amin'ny loko voajanahary vita amin'ny seramika tsy misy poizina ary mety ho an'ny olon-dehibe na ankizy 3 taona +.
【Tsy mila mivory】 Azonao apetraka ao amin'ny birao, efitrano fianarana, latabatra tsy misy dikany, ivon-javakanto, efitrano fatoriana..Izany dia nampihena ny kaontenera sy nandamina tsara kokoa.
Choice Safidy fanomezana tonga lafatra】 Tonga amin'ny famonosana boaty fanomezana mahery, fanomezana tsara indrindra ho an'ny mpampianatra, mpianatra, zazalahy sy zazavavy kely.
【Ataovy madio ny latabatrao penc Tavoahangy pensilihazo maro loko izay mitahiry ny penina, pensilihazo ary fijanonana mitazona ny birao tsy misy korontana sy milamina.
Vazy misy tsipika mitsangana
Namboarina toy ny vera mahazaka hafanana, azonao atao ny manana voninkazo maina na hydroponics handravaka ny habakao.
Ireo endrika kely mahafinaritra sy zava-maniry maitso dia hanampy hery be ao an-tranonao na any amin'ny birao any an-tranonao na any amin'ny biraonao.
Mety amin'ny haingon-trano latabatra, dabilio, kabinetra ary worktop, indrindra amin'ny fiainana andavanandro sy ny fampakaram-bady.
Hevitra haingo tsara ho an'ny trano, zaridaina, fampakaram-bady na fialantsasatra. Manampy amin'ny fanatsarana sy fanadiovana ny tranonao na ny birao misy anao, haingon-trano tsara ho anao
Ny firavaka vazy tsara miaraka amin'ny voninkazo mety, amin'ny toerana mahafinaritra, dia mahafinaritra ny maso.
★ Fitaovana: Glass
★ loko: maintso, volondavenona, manga, volomparasy, mangarahara
★ Ny felam-boninkazo vazy feno dia feno avy amin'ny hatsaran'ny voninkazo ary amin'ny ampahany amin'ny fiarovana ny vazy. Ity fitaovana voninkazo ity dia manome trano ahalalana voninkazo marobe.
★ Voaravaka ny vava vazy, boribory ary malama nefa tsy mandratra tanana.
★ matevina ny fanambanin'ny tavoahangy ary apetraka milamina sy mafy
Decor Haingo fanaovana trano fandraisam-bahiny】 Fomba mahafatifaty hanararaotana ny trano fialofana tianao indrindra! Raiso ity ho toy ny add-on napetraka ho any amin'ny tranonao saribakoly, na amin'ny azy manokana! Ahitana ny zavatra rehetra ilainao hilalao sy mody mody.
Gift Fanomezana tonga lafatra】 Ny sary milalao maharitra maharitra dia mety tsara amin'ny tanana kely! Tsara ho an'ny sary milalao sy fanampiana tonga lafatra amin'ny fanangonana trano fandraisam-bahiny. Fanomezana krismasy, fanomezana brithday.
Toy Kilalao fampivoarana】 Ireo lalao mahafinaritra ireo dia mampiroborobo ny fandrosoana ara-pahalalana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny lalao mody. Ny fampihetsehana ny tantara dia hampiasa fomba fisainana fitantarana sy fanakianana, raha mihatsara kosa ny fahaiza-moto sy ny fahaizan'ny moto rehefa manodikodina ny tontolo mahafinaritra.
Material Fitaovana azo antoka】 Famaranana tsy misy poizina sy fitaovana azo antoka ho an'ny ankizy.
【Fanamarihana】 Ity entana ity dia tsy haben'ny fiainana, ho an'ny haingon-trano ihany, tsy misy fiasa azo ampiharina.
Fitaovana: windproof vera, vy tsy misy fangarony mifangaro amin'ny tady hemp manual, fomban'ny firenena amerikana.
Manome labozia ity mpihazona labozia ity, milaza fa rehefa mirehitra ny labozia dia aza afindra ny tanana.
Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny habakao toy ny vazy, mametraka zavamaniry, na maka tahaka ny zavamaniry.
Raha heverinao fa mampidi-doza ny tena labozia dia afaka mametraka labozia elektronika ianao.
Ho an'ny nostalgia lamaody, ny olona maoderina dia miha mampiasa labozia, labozia handravahana ny trano, hampiakatra ny rivotra iainana.
Vita amin'ny vera maimaim-poana Lead
Volavola maoderina kanto namboarin'ireo matihanina
Natao ho an'ny fampiasana sy fitehirizana mora, mety amin'ny fotoana rehetra
Ny vazy fitaratra dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, ny lafiny rehetra sy ny ambany dia mihalehibe endrika izay mijoro tsara. Milamina ny sisin'ny vavan'ny tavoahangy, ary tsy hikorontana ny tananao ny fandaminana voninkazo.
Ny famolavolana kofehy prismatic mitsangana dia mahatonga azy manokana ho an'ny haingon-trano, mazava tsara raha vao jerenao ny fotony.
Fitambarana fampiasa sy hatsarana, vazy fitaratra haingon-trano tsara ho an'ny fametrahana voninkazo na fambolena zana-ketsa; Volavola tsotra fa voaravaka mora amin'ny fomba hafa.
Ny vazy voninkazo fitaratra dia tsara ho an'ny tranonao, birao, cafe, efitrano fandrianao sns. Ny fifangaroan'ny voninkazo sy vazy tsara tarehy dia mety ho lasa toerana mahafinaritra eo amin'ny toeranao.